TS in MP4- Sida loo Beddelaan TS in MP4 on Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan TS in MP4 ee Mac OS X Libaaxa / Windows
Mararka qaar waxaad u qoraan laga yaabaa in videos aad fiidiyo JVC ama videos qaar ka mid ah lagala soo bixi qaar ka Internet leeyihiin. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan videos kuwani waa qaab TS iyo in aan la wadaagi karaa on Facebook, YouTube ama aan lagu ciyaari karaa telefoonka. Xaaladdan oo kale, waxaad isku dayi kartaa HD Video Converter ah (Windows 8 taageeray) si loogu badalo TS in MP4, qaabka video ugu weyn loo isticmaalo. Waxa kale oo aad edit karaa TS video hor TS in ay diinta ka MP4.
Qeybta 1: TS Best in MP4 Video Converter
Qeybta 2: TS Free in Converter MP4
Qeybta 3: TS Online in Converter MP4
Qeybta 4: Extended Knowlege u TS iyo MP4
Qeybta 1: TS Best in MP4 Video Converter for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• Beddelaan TS in MP4, AVI, MKV, MP4, MOV, iwm
• Beddelaan TS si iPhone, iPad, Samsung, YouTube, HTC la presets.
• Beddelaan videos la AAN tayada khasaaro, xafidaada 100% aad video tayada asalka ah.
• Beddelaan qaabab video 30 jeer ka dhakhsi badan oo kale oo converters video.
Sida loo badalo TS in MP4
Haddii aad tahay user Windows ah, kaliya raacaan tutorial hoose si loogu badalo TS in MP4 for Windows (Windows 8 taageeray). Haddii aad rabto in aad si loogu badalo TS in MP4 ee Mac (Maverick ka mid ah), kala soo bixi Video Converter u Mac version. Tani app Mac badalo qaab TS in qaab MP4 Mac aan laga badinin tayada video ah oo ay leeyihiin xawaaraha diinta super si degdeg ah kaas oo lagu badbaadin lahaa waqti aad u badan.
1. Ku dar files .TS in TS ay u Converter MP4
Waxaad riix kartaa "Add Files" button in aad ku darto files TS ka folder computer ama kaliya jiidi & hoos u TS aad videos liiska file si toos ah.
2. Dooro MP4 sida qaab wax soo saarka
Dooro MP4 sida qaab saarka ka liis qaabab kala saaraa wax soo saarka ee liiska hoos-hoos "Qaabka Output" iyo sheeg gal ah si loo badbaadiyo files MP4 gediyay ee "Open Folder" field.
Tani TS in MP4 HD Video Converter (Windows 8 taageeray) wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xaalkaa faylasha video by falinjeeerka, lana siii ama ku daray saamaynta gaar ah iyo watermarks, iyo sidoo kale biirtay dhowr clips ka mid galeen. Kaliya Waxaad riix kartaa "Edit" on video ah laga keeno in la shakhsiyeeyo aad TS video.
3. Start si loogu badalo file TS in file MP4
Ka dib markii ay wax walba oo la sameeyo, guji " Beddelaan "si loogu badalo TS in MP4. Oo dadkii oo dhammu hawlaha la sameyn doonaa at xawaaraha si dhakhso ah oo tayo sare leh. Xawaaraha Wareejinta waxaa inta badan ku xiran tahay asalka video baaxadda iyo qaabeynta PC.
Hadda waxaad la xiran kartaa iPod / iPhone, ama ciyaaryahan kale oo warbaahinta la qaadi karo aad leedahay PC, iyo wareejiyo files MP4 kuwaas waxaa si. Waad og tahay ciyaaryahan warbaahinta ugu qaadi karo aqbalay qaab MP4, sida iPod, iPhone, Walkman, PSP, Zune, Creative kamidka ah, iwm Hadda, waxaa la gaarey waqtigii labada ama record fiidiyo soo bixi .ts video raaxaysan aad qaadi karo media player.
Video Tutorial: Sida loo isticmaalo this TS in MP4 Video Converter for Windows
# 1. Free Video Converter: Wondershare TS Free in Converter MP4
Codsigan aad u sheegi kartaa MP4 TS diinta si fudud xor ah oo aan wax dadaal ah. Just waxay isku dayaan.
Pro: 100% FREE, lacag dheeraad ah ma.
1. Marka la barbar dhigo Video Converter Ultimate, free version tani ma u bedeli karaan si 3D iyo HD video.
2. Waxa aanu taageeraan badalo qalabka, ma presets gudaha Converter ah.
3. Waxa aanu taageeraan DVD gubanaya.
Qeybta 4: Aqoonta Extended u Qaabka TS iyo MP4
TS waa .ts waa il gaadiidka ah, oo aan si dhab ah weel sida avi ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu baahin-qeexidda sare TV (HDTV). MP4 waa qaab weelka loo isticmaalaa in lagu kaydiyo video, audio, iyo xogta subtitles ah. Tan iyo dukaamada sida Lugood isticmaalaa qaab weel, waxaa si weyn loo isticmaalo la iPod iyo Playstation (PSP), iPhone, iPad, iwm
MPEG Guuritaanka Picture Khubarada Group
Badalo MP4 in ISO
Beddelaan MP4 in iPad
dar subtitles in MP4
Beddelaan AVI in MP4
M4V Beddelaan inay MP4 Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file MP4 ah
Sida loo rogo ama MTS in MP4 ee Mac / Win